Ide Mmiri Agbàgbuola Mmadụ Anọ n'Ọnịsha, Mee Mkpamkpa n'Okpoko
Mmadụ anọ ahụ, ndị a kọwara dịka ndị na-arụ n'otu ụlọ ọba ego dị na mpaghara ahụ, bụ ndị e kwuru na ha chegidere ka mmiri ozuzo ahụ kwụsị ma ọ chọghị ịkwụsị wee rukwaa oge ha mechiri ọrụ, nke mezịrị ka ha kpebie ibu ya wee laa; ha anọ wee bàkọọ otu ụgbọala, bụkwazị nke oke ide mmiri buchaara n'okporo ụzọ oge ha na-ala, ma sụnye ya isi n'otu ọwà mmiri chere ihu n'ohimiri Niger, ebe ha nọzịrị wee ghọrọ ozu.
Dịka otu onye ọnọ mgbe o mere siri kwuo, mmadụ anọ, tinyere otu nwata nwaanyị bụ ndị a hụrụ n'ime ụgbọala ahụ ka ha nọ n'egwù ma na-agbakarị ala ịzọta onwe ha n'ihi na ide mmiri ahụ asachiela iro niile, mana o nweghị ihe ha pụrụ imeta banyere nke ahụ, wee ruo oge ọ sụnyere ha isi n'ọwà mmiri ahụ, bụ nke ímì ya ruru ihe dịka fiiti iri na ise.
Ka ọ dị ugbu a, e bubutala ụgbọala ahụ ma nweta ozu mmadụ anọ, ma ozu nwatakịrị nwaanyị ahụ bụ nke a na-ahụghị, ebe ndị mmadụ na-ekwu na e leghị anya, ọ bụrụ na mmiri buuru ya gbadaa ohimiri Niger, bụ ebe ọ nọzịrị wee funyụọ anya.
N'okwu dịkwa ka ibe ya, oke egwu dakwara n'Okpoko dị n'okpuru ọchịchị Ọgbaru na steeti Anambra n'isi ngwụcha izuuka ahụ, dịka oke ide mmiri wakporo obodo ahụ ma bibie ọtụtụ ihe gburu nde kwuru nde naịra, dịka eluigwe kwughepuru ụbọchị ahụ. Ihe ndị ahụ mmiri bibìri gụnyere ụlọ akwụkwọ na ụlọ mmadụ, ebe oke iju mmiri hubatakwara n'ime ụlọ ọtụtụ ndị, wee derìsie ihe ha jiri biri.
N'ajụjụ ọnụ a gbara ya, osote onyeisi otu ụlọ akwụkwọ ide mmiri ahụ metụtara, bụ oriakụ Helen Ọhaemesi kwuru na ya bụ mwakpo ide mmiri na-achọzị ịbụ omenahọ n'ihi na kwa ahọ ọbụla, ụdị ihe ahụ na-adakwasị ha. O mere ka a mara na ide mmiri ahụ kwaturu ogige ụlọakwụkwọ ahụ, ma bibìsie ọtụtụ akwụkwọ na ihe ndị ọzọ ha ji arụ ọrụ, ma kpọkuzie gọọmenti steeti ahụ ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka, n'ihi na nke a mere n'isi mbido udu mmiri egosila ha ihe akaghị ime ma a batazie n'etiti ọnwa mmiri kpọmkwem.
Ụfọdụ ndị e ji okwu ha agba izu n'obodo ahụ, nke gụnyere maazị Benson Nwawulu, bụ onye na-anọchite anya ọgbọ nta nkwàdo Ọgbaru nke abụọ n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti Anambra, na maazị Ephraim Mmadụ, bụ onye nọ n'agbata gọvanọ steeti ahụ na ndị obodo ahụ kwuru na iji ahịhịa sụchie ọwa mmiri so n'otu ihe kpata ide mmiri ahụ jiri kawanye njọ, kpọpụtasịa ụfọdụ mbọ dị iche iche ndị obodo ahụ gbagoro n'onwe ha iji weta ọnọdụ ọjọọ ahụ n'isi njedobe, kpọkuo ụmụafọ obodo ahụ ka ha kwụsị ịwụnye ahịhịa n'ọwà mmiri, ma kpọkuziekwa gọọmenti steeti ahụ ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka n'imemila ọnọdụ ahụ na idozi ihe ndị ide mmiri ahụ mebisigoro.